प्युठानको सिरक डसना उद्योगमा आगलागी हुँदा ६५ लाखको क्षती – purnakhabar.com
मङ्सिर ६, प्युठान । प्युठानको एक उद्योगमा आगलागी हुँदा ६५ लाख बढिको नोक्सानी भएको छ ।
बिहिवार दिउँसो प्युठान नगरपालिका–७ पुण्यखोला स्थित सुप्रिया सिरक डसना र मिल उद्योगमा विद्युत सर्ट भई आगलागी भएको हो । आगलागीबाट उद्योगमा रहेका सबै सामान जलेर नष्ट्र भएको भएको उद्योगका सञ्चालक प्रदिप केसीले बताए ।
उनका अनुसार तयारी सिरक डसना, सिरक डसना बनाउन आवश्यक कच्चा पदार्थ, निमार्ण गर्ने मेसिन, मिल नष्ट भएका छन् । साथै घरको विस मुरी धान संगै पिसाउन , कुटाउन लिएको ५ मुरी जति धान, मकै, गहुँ जलेर नष्ट भएको केसीले जानकारी दिए । केसी विगत ३ वर्ष देखि उद्योग सञ्चालन गर्दै आएका छन ।
दिउँसो २ बजे लागेको आगो १ घण्टापछि मात्र नियन्त्रणमा आएको प्रहरीले जनाएको छ । उद्योगमा लागेको आगो स्थानिय, शसस्त्र र नेपाली सेनाले नियन्त्रणमा लिएको बताइएको छ ।
सन्तोषलाई विना शर्त रिहाई नगरे कडा प्रतिवाद गर्ने नेकपाको चेतावनी
असोज १, दाङ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका रोल्पा जिल्ला सेक्रेटरी सन्तोष सुवेदी प्रयास पक्राउ परेका छन् । रोल्पा नगरपालिका लिवाङबाट सुवेदी पक्राउ परेका हुन् । शान्तिपूर्ण जनसभामा भइरहेको जनसभाबाट आफ्ना रोल्पा सेक्रेटरीलाई पक्राउ गरेको भन्दै नेकपाले विरोध जनाएको छ । शान्तिपूर्ण रुपमा आमसभाबाट प्रहरीले विनाकारण आफ्ना नेतालाई गिरफ्तार गरेको भन्दै पार्टीका राप्ती ब्यूरो ईञ्चार्ज सुवासले […]
दशै कसको पर्व हो ?
दशै कसको पर्व हो ? उत्तर सहजै छ, दशै नेपालीहरुको पर्व हो । हामी बर्तमानमा छौँ । धर्म निरपेक्ष देशमा छौँ । धर्म निरपेक्ष राज्य ब्यबस्थाले दशै नेपाली पर्व हो भनेर बोलिसकेको छ । संविधानले बोलिसकेपछी संविधान मान्ने जनहरुले दशै हाम्रो होइन भन्नू एकदम गलत हुनेछ । हिजोको ब्यबस्थामा खस भाषालाई मात्रै राष्ट्रिय भाषा मानिन्थ्यो […]
विकासे अवरोध हटाउन मुख्यमन्त्री गुरुङले बनाए ‘वार रुम’